काठमाडौँ, भदौ ३१ । केहि समय पहिले आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर प्रचार गर्दै आएका रामबहादुर बम्बजन ‘धर्मगुरु’ माथि अहिले १८ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । शनिबार बलात्कार पिडित भनिएकी १८ वर्षीय आनीले ललितपुरमा केहि महिला अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस कुराको खुलासा गरेकी हुन् ।
‘धर्मगुरु’ बम्जनले आफुलाई पटक-पटक बलात्कार गरेको आनीले बताएकी हुन् । उनि २ वर्ष पहिले रामबहादुर बम्बजनको गुम्बा (सिन्धुली) मा आनी बन्न गएकी थिइन्। आफुले यस कुरालाई पहिले नै बाहिर ल्याउन चाहेको तर ‘धर्मगुरु’ की श्रीमतीले धम्क्याएपछि उजुरी नगरेको आनीले बताएकी छिन् । पहिलो पटक ‘धर्मगुरु’ की श्रीमती काठमाडौँ आएको बेला आफुलाई बलात्कार गरेको र त्यसयता पनि पटक-पटक बलात्कार गरेको भन्दै आनीले दाबि गरेकी छिन् । साथै आनिलाई पैसा चोरेको अभियोगमा कारबाही गरेको कुरा बम्जन पक्षधरका केही व्यक्तिहरुले नै बताएका हुन् । आनीले आफु बलात्कार भएको कुरा उठाउदा गुरुले आफूमाथि चोरको आरोप लगाएको उनले बताएकी छिन्।
यसरी भएको रहेछ युएस बंगला विमान दुर्घटना [सीसी टिभी फुटेज लिक ] , यो भिडियो हेर्नुहोस्
प्रकाशित : आइतबार, भदौ ३१, २०७५१६:११
सवारी दुर्घटनामा १५५ जनाको मृत्यु !
काभ्रेको बनेपामा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा शिक्षकको मृत्यु, १ घाइते
नयाँ वर्षको पहिलो दिन मात्र फुल्ने अनौठो फूल फुल्यो, भारतबाटसमेत हेर्न आउने लाखौँको घुँइचो
ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य!
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाका स्वकिय सचिव कुटिए !
वडा सचिवको मिलोमतोमा हकदारलाई झुक्याएर नामसारी गरिएको जग्गाको उजूरी जनअदालतमा परेपछि कब्जा !